Best Anodized Aluminium Hex Standoff, uHex Aluminium Standoffs Umkhiqizi eChina
Incazelo:I-Aluminium Hex Standoff,I-Anodized Aluminium Hex Standoff,I-Aluminium Hex Female Threaded Standoff ,I-Hex Aluminium Standoffs,,
Home > Imikhiqizo > Ama-Standoffs enziwe ngokwezifiso > I-Aluminium Hex Standoff
Izigaba zomkhiqizo we- I-Aluminium Hex Standoff , singabakhiqizi abakhethekile abavela eChina, I-Aluminium Hex Standoff , I-Anodized Aluminium Hex Standoff abahlinzeki / ifakethe, imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye- I-Aluminium Hex Female Threaded Standoff R & D kanye nokukhiqizwa, sinemisebenzi ephelele emva kokuthengisa nokusekela lobuchwepheshe. Bheka phambili ukubambisana kwakho!
I-M3 Aluminium Hardware Drone Ihlanganisiwe Isikulufa se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwezinto zokubopha ze-aluminium. Imvamisa isetshenziselwa okokusebenza kwasekhaya nasehhovisi, imishini yokuxhumana, ukuhlangana...
Ukuqonda okuphezulu kwe-hex aluminium ephezulu yama-quadcopter I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Imininingwane: Indwangu:...
Incazelo Yomkhiqizo: Ukuthengiswa okushisayo okuphezulu kokuqina okuxubile kombala we-aluminium I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo...
Uhlobo olunemibala engafani nolimi lwe-aluminium standoff umehluko I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Imininingwane:...
Intengo yokukodwa: USD 0.19 / Piece/Pieces
Ama-M4 ama-35 aluminium egolide Ngaphandle kwe-Aluminium Hex Standoff, siphinde sibe ne-Aluminium Round Standoff, i-Aluminium Step Standoff, i-Aluminium Knurled Standoff, I-Aluminium Sign Standoffs Ukubuka konke kwenkampani I-FAQ Q: 1.
I-Motherboard aluminium standoff screws ye-M6 Amanye amakhasimende angangibuza ukuthi kungani engakhethi i-aluminium engama-7075 ukwenza i-aluminium standoff. Lokhu kungenxa yokuthi ubunzima be-aluminium engu-6061 banele. I-Plus 7075 inzima...
Owesifazane owesilisa ocwebeziwe nge-hex standoff aluminium noma i-nylon I-Anodized Aluminium Hex Standoff inendawo enhle engaphezulu nentambo yowesifazane emikhawulweni yomibili. I-Aluminium isisindo esilula nokumelana nokulungiswa, ngakho-ke...
Incazelo Yomkhiqizo: I-standoff ekhethekile exubekile ngombala we-hex aluminium standoff I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ku-Carbon fiber kanye ne-hardware cishe iminyaka eyishumi. Ukuze uhlangabezane nesidingo samakhasimende...
Ukwehla Komkhiqizo: Hot yokuthengisa aluminium sinyathelo ukuma kanye knurled I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....
Ukwehla Komkhiqizo: New design standoff hex aluminium isinyathelo sokuma I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Imininingwane:...
Ukwehla Komkhiqizo: Umbala ogcwele anodised hex aluminium standoff I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Imininingwane:...
Incazelo Yomkhiqizo IMulticolor Anodized Hex Aluminium Standoffs Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....
I-Stainless Steel Aluminium Brass Thread Hex Spacer Independent aluminum hex standoff is useless,it normally connect with other hardware product.such as screws,nuts and so on. Our standoff have thread in the both end and the thread size is M3.Of...
I-Custom Precision Blue Anodized Aluminium M3 Isinyathelo sowesilisa / sowesifazane Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav,...
Isitolo esithengisa izinto ezinhlobonhlobo i-wholesale hex caps aluminium Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho...
I-Hot sale Aluminium Anodised Hex Sign Support Standoff Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu. Kukhona...
wholesale M3 aluminium anodised standoff Ngokuma kwe- Aluminium , kunezitayela eziningi esitokweni sethu neminye imibala (imibala engu-9) Ezinjengokuthi: Aluminium Round Standoff, Aluminium Knurled Standoff, Aluminium Step Standoff, Aluminium Hex...
I-Custom Length Hex Isinyathelo Sokuvala I-Aluminium Standoff Isingeniso Somkhiqizo I-aluminium standoff ngokuvamile ibhekwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Ngokuvamile kusetshenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, imboni ngisho nendlu....
I-China I-Aluminium Hex Standoff Abahlinzeki
Ama-hex Standoffs ethu, enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ze-aluminium, afaka isicwebezelisi se-finised anodised.both glossy noMatte ayatholakala. Ama-hex standoffs anikeza ukubukeka kwesimanjemanje ngemigqa ehlanzekile ebukeka imangalisa lapho ifakwa kwinto enamakhonkolo. Kungaba lula kakhulu ngethuluzi ukufaka ama-standoffs ngenxa yama-cornors Thick thickness enza ama-standoff aqine, angathwala iphawundi ngaphezulu ngaphandle kwethonya. Ilungele i-drone enkulu ne-anti-umthelela we-drone.
Osayizi abenziwe ngokwezifiso bonke bamukelekile ngathi.Ngoba uhlobo oludumile kakhulu, njenge-M3X25mm, M3X30mm, ubude be-M3X35mm, imvamisa inayo yonke imibala esitokisini, ingahanjiswa ngesikhathi.
I-Aluminium Hex Standoff I-Anodized Aluminium Hex Standoff I-Aluminium Hex Female Threaded Standoff I-Hex Aluminium Standoffs I-Aluminium Hex Standoffs